February 2021 – Shwe Yaung Lan
February 28, 2021 Writer Magic 0
တိုင်ရွန်ကတော့ လတ်တလော မှာဆိုရင် ပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ကာ နေ့စဉ်တိုင်းလိုလို လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်သလို ရှေ့ကနေလည်း ဆန္ဒပြ ပြည်သူတွေ ထိခိုက်မှုမရှိရအောင် အကာအကွယ်အပြည့်ပေးတာ စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်းတိုင်ရွန်က ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေး ရင်းအန္တရာယ်ကနေ ကံကောင်းစွာ လွတ်မြောက်ခဲ့ရကြောင်းကိုခုလိုပုံလေးတွေနဲ့တကွ ရေးသားဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ “Today our team ပြန်တာစောလို့ညှပ်ပိတ်မခံလိုက်ရပါဘူး ၃မိနစ်လောက်သာနောက်ကျရင် ထွက်လို့မလွယ်တော့ဘူး ရဲအင်အားတွေနဲ့ ပိတ်ဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေတာ နောက်ဘက်ကနေ”ဆိုတဲ့စာလေးပဲဖြစ်ရာ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါ တယ်။ Credit […]
February 25, 2021 Writer Magic 0
ရောင်းဖို့မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ ထီအထုပ်ကနေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ပေါက်ခဲ့ ထီရောင်းဖို့ ၁၆၅စောင်ကျန်နေတဲ့ အထုပ်က ပေါက်နေမှန်း နောက်ရက်မှသိခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက် စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေ့မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ၂၄ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲမှာ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို သန်လျင်မြို့နယ်က ရွှေဘုံသာထီဆိုင်ပိုင်ရှင် မတင်တင်ဝင်းက ကံထူးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုကို ရောင်းဖို့မေ့ကျန်နေခဲ့တဲ့ ထီ၁၆၅စောင် အထုပ်ထဲက ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထီဖွင့်တဲ့ရက်မှာ ပေါက်နေမှန်း မသိခဲ့ဘူးလို့ မတင်တင်ဝင်းက Duwun ကို ပြောပါတယ်။ ” ကိစ္စတွေက […]
စိုင်းစိုင်းခမ်းလိုင်၊ ပိုင်တံခွန်၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်နဲ့ သူဇာဝင့်လွင့်တို့လေးယောက်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုကိုယ်စီရရှိနေကြတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် ။ သူတို့လေးယောက်လုံးက လတ်တလောမှာဆိုရင် ပြည်သူပရိသတ်တွေဘက်ကနေ အခိုင်အမာရပ်တည်ပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အတူ တစ်သားတည်းထပ်တူကျတဲ့ သူတို့လေးယောက်က ပြည်သူတစ်ယောက်နေရာကနေ ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးအတွက် တာဝန်ကျေပွန်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပိုင်တံခွန်ဟာဆိုရင် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ နေ့တိုင်းလိုလို ရဲဝင့်တက်ကြွစွာပါဝင်ပြီး ပြည်သူလူထုကို အရှေ့ဆုံးကနေ ကာကွယ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရွှေကစ်အနေနဲ့ကလည်း တရားစခန်းကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ […]
ကျောကုန်းပေါ်မှာ ဆိုလာပြားနဲ့ သတ္ထုမျှဉ်တွေပါတဲ့ သိန်းငှက် ရုပ်သံ ထွက်လာပြီ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရေဦးမြို့နယ် လိန်တောကျေးရွာအုပ်စု ဂုဏ်တန်ကျေးရွာ ကိုဝင်းဇော်ထွေး မှ ယနေ့ ၂၃.၂.၂၀၂၁ နံနက် ၁၀ နာရီက တွေ့ရှိရသော သိန်းငှက် အား ရေဦးမြို့နယ် သစ်တော ဦးစီးဌာန သို့ လာရောက်အပ်နှံ ၍ ဂုဏ်ပြုဆုငွေ ၃၀၀၀၀ ကျပ် ‌ပြန်လည်ပေးအပ်ပါသည်။သိန်းငှက်သည် သေးငယ်သောမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားမှာခေါင်းမှ အမြီးဆုံးထိ ၁ ပေ […]
ဦးခေါင်းပွင့်ထွက်ပြီး သေတဲ့ ကလေးလေးက ဝေယံထွန်း အသက်က ၁၆ နှစ်။ သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်နဲ့….
ဦးခေါင်းပွင့်ထွက်ပြီး သေတဲ့ ကလေးလေးက ဝေယံထွန်း အသက်က ၁၆ နှစ်။ သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်နဲ့…. ခေါင်းပွင့်ထွက်ပြီးသေတဲ့ကလေးလေးက သူ့ဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးလောက် ရှိရင်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ ပိုက်ဆံရှာ… စုဗူးလေးနဲ့စုနေတာတဲ့။ မနေ့ကတော့ ၄၁ လမ်းစျေး အလုပ်လုပ်ဖို့သွားရင်း မထင်မှတ်ဘဲဆန္ဒပြပွဲနဲ့ကြုံ… နောက်တော့… ….. ….. ကလေးရဲ့မွေးစားအမေဆိုသူနဲ့ပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အန်တီကြီးခမျာ ကလေးအကြောင်းပြောပြနေရင်းနဲ့ ငိုလိုက်တာဆိုတာလေ…😢 ကလေးလေးက ဝေယံထွန်း။ အသက်က ၁၆ နှစ်။ မိဘနဲ့မနေဘဲ မန္တလေးတက်လာတာ။ […]
Mytel က အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်ထွက်ပြီး မုန့်ဟင်းခါးရောင်းနေပါပြီ
Mytel က အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်ထွက်ပြီး မုန့်ဟင်းခါးရောင်းနေပါပြီ Mytel Radio Engineer အလုပ်ထွက်ပြီး မုန့်ဟင်းခါး ရောင်းနေပြီ…အားပေးကြပါအုံး ဂုဏ်ယူပါတယ်မုံရွာ ဒေါင်းကျောင်းရှေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ Credit မူရင်း သတင်းဓာတ်ပုံ သတင်းဓာတ်ပုံ သတင်းဓာတ်ပုံ